Ray aman-dreny - Zontsika. |
Tahaka ny ray aman-drenintsika no angatahintsika amin'ireo zanatsika:
-> Miala amin'ny programa any an-tsekoly ireo ideolojia momba ny lahy sy vavy.
-> Ireo fandaharan'asa fampihorohoroana izay miresaka amin'ny karazam-pihetseham-po rehetra dia ampiharina any an-tsekoly.
-> Ireo mpampianatra dia manana torolalana hentitra momba izay ampianarina amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo.
-> Ny fandaharam-pianarana momba ny firaisana ara-nofo dia miverina amin'ny lesona momba ny biolojia ara-pananahana
-> Ireo sary ara-nofo mahatsiravina ireo dia nesorina tao amin'ny fandaharanasa firaisana ara-nofo.
-> Ny fandaharam-pianarana momba ny firaisana ara-nofo dia taona mety.
-> Ny ankizy dia tsy iharan'ny herisetra amin'ny fampidirana ny tsiambaratelon'ny kilasy.
-> Ny ray aman-dreny dia manana fahafahana miditra amin'ny votoatin'ny fitaovana fandaharana amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo.
-> Tsy omena fahafahana miditra amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny firaisana ara-nofo sy ara-pananahana ny ankizy.
-> Ny ray aman-dreny dia mitazona ny zo hamaritra ny fitsipi-pitondran-tenan'ny zanany.
-> Io zatovo io, miaraka amin'ny fanohanan'ny fianakaviana, dia avela hanapa-kevitra ny olana momba ny lahy sy ny vavy.
-> Ny ray aman-dreny dia mitazona ny zo hamaritra ny fitarihan'ny zanaka eo amin'ny fiainana.